‘एसेसिनेशन्’: रामानन्द चोक र वागमती किनार – Kanak Mani Dixit
हिमाल खबरपत्रिका (१-१५ असार २०६९ ) बाट
रामानन्द चोक हत्याकाण्ड कसले रच्यो भन्ने प्रश्नको जवाफमा हेर्नुपर्दछ, त्यसले कसलाई ‘फाइदा’ गर्‍यो? बढी सम्भावना मिथिलालाई समथरको छुट्टै प्रान्त देख्न नचाहने शक्ति, समूह वा गुटले गर्‍यो। नत्र ब्लाष्ट गराउनुको अर्थ के? नेपालको तराई भूभागमा सांस्कृतिक र भाषिक विविधतालाई स्वीकार्न नचाहने कुनै शक्तिले गर्‍यो या गरायो भन्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ किनभने ब्लाष्टको तत्कालीन फाइदा त्यतैतिरको लागि भएको देखिन्छ।
न्यायाधीश बमको ‘टार्गेट’ छनोट एक सिपालु योजनाकारले गरेको देखिन्छ। उनीमाथि महाभियोग लगाउने कुरा चलिरहेको हुनाले उनले केही गैरनैतिक, गैरकानूनी काम गरेको शंका जनतामाझ् थियो। यसकारण उनको हत्या हुँदा आम नागरिकमा उनको विगतले नै उनलाई पछ्याएको हो कि भनेर विचार निर्माण हुनु स्वाभाविक थियो। यसरी हत्याको राजनीतिक मकसदको ढाकछोप हुने भयो, कसैको औंला त्यतातिर तेर्सिने भएन।
उता योजनाको मूल उद्देश्य अनुसार केन्द्रदेखि जिल्लाका न्यायालयको मनोबलमा चोट पुर्‍याउने काम चाहिं भयो। न्यायालयलाई मात्र नभई पूरै कानून व्यवस्था र कानून व्यवसायलाई हतोत्साही बनाउने सम्भावना पनि रह्यो। ‘हे कानूनी शासन र जवाफदेहिताका कुरा गर्नेहरू हो, सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई त हामी मेटाउन सक्छौं भने तिमीहरूको के कुरा!’– सन्देश यस्तै हुनसक्छ।
कुनै बौलाहा या अनियन्त्रित शक्तिले मिथिलाका सांस्कृतिक जुझारु र श्रीमान् रणबहादुर बमको ज्यान लिएका होइनन्। दुवै हत्याकाण्ड ‘टार्गेटेड किलिङ’ थिए― राष्ट्रिय समाजलाई अस्तव्यस्त तुल्याएर आफ्नो जग बलियो बनाउने हिंसाप्रेमी तत्वहरूले गरेको राजनीतिक हत्या।
कस्तो सरकार? शीर्ष नेताहरुको संयुक्त सरकार!